Uhlala uqaphela inwele ezininzi kwi-pillow ekuseni. Ukuxubha kwi-scalp, uyamangalisa kukuba inani leenwele liye laphuma. Uyazi ukuba yonke imihla umntu ulahlekelwa yimishumi imihla ngemihla, kwaye oku kuqhelekileyo.
Kodwa uqale uqaphele ukuba imihla ngemihla inwele zakho ziyawa ngaphezulu. Ixesha lokubonakalisa nokunyamekela ingxaki. Umbuzo wokuqala ovela entloko: yintoni eyabangela ukulahleka kweenwele?
Ngenxa yeenwele ezinokuba ziqabile kwaye iindlela zokuphelisa izizathu zokulahleka kweenwele:
Izifo ezihamba ngeHormonal
• Ukuxhomekeka kwemvelo
• Ukunciphisa umzimba
• Izifo zangaphakathi zomzimba (ukungabikho kwe-anemia, i-hepatopathies, i-diabetes mellitus kunye nabanye).
Izifo ezithathelwanayo zesikhumba (i-dermatitis, seborrhea, njl)
• I-Chemotherapy okanye unyango lwe-hormonal
• Impembelelo yezinto zangaphandle ezinobundlobongela (iimpawu zamakhemikhali, imibala yeenwele, isimboli eshushu)
• Ukunikezelwa kwegazi okwaneleyo kwiingcambu zeenwele kunye ne-scalp
• Ukulahleka kweenwele zithuba emva kokubeleka
• Ukusebenza phantsi kwe-anesthesia jikelele
• Ubume bendalo
• Ukutya okungalunganga
Ngokwimeko yokulahleka, ukulahleka kweenwele zesikhashana kunye ne-pathological (alopecia okanye alopecia) ziyahluka. Ukuba ukulahleka kweenwele kungokwesikhashana, izinwele zezinwele azifi. Ngoko ke, ukuba unyango luqaliswa ngexesha elifanelekileyo, ukukhula kweenwele kungabuyiselwa ngokukhawuleza. Xa unesifo esiyingozi sisifo sinzima kwaye isisombululo siphumelele sale ngxaki kufuneka uqhagamshelane nogqirha ngokukhawuleza - isazi sezintlu.
Amadoda ahlala ehlupheka ngenxa yokulahleka kweenwele. I-Alopecia emadodeni inomdla kakhulu kummandla weparietal kunye nommandla ongaphambili. Isizathu sokulahleka kweenwele ngokuqhelekileyo sisimo semfuza, kodwa ngamanye amaxesha isitshixo sihlala kwisidlo esingalunganga. Ukuqinisekisa ukuba iinwele zomelele, kubalulekile ukuqinisekisa ukutya kwe-vithamini B. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukutshaya kubangele ukutyunjwa kwamavithamini emzimbeni. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuphilisana, ukuze iinwele zakho zibukeke njenge-chic, kufuneka unikezele lo mlutha.
Ukulahleka kweenwele kunokuchaphazeleka ngamaqondo aphantsi okanye aphezulu. Ngako oko, kucetyiswa ukuba usebenzise intloko efanelekileyo.
Ukulahleka kweenwele kwabasetyhini kudla ngokubanjelwa yimiphunga ye-hormone. Ayikho imfihlo yokuba ihomoni ye-hormone ye-estrogen ikwandisa umjikelezo wobomi beenwele, kunye ne-androgen (i-hormone yamadoda), ngokuchaseneyo, iyanciphisa. Emzimbeni womfazi, zombini ama hormone aqulethwe kwi-balance. Kodwa ngexesha loxinzelelo lwe-hormonal (ukuyeka umyeni, ukubeletha, ukuthatha amacwecwe e-hormone), lo mgangatho uphazamisekile, umxholo we-estrogen emzimbeni uyawa, kwaye ngenxa yoko, ukulahleka kweenwele kungaqala.
Izindlela eziphambili zokuphelisa iindleko zokulahleka kweenwele
Impazamo ebalulekileyo kunayo nayiphi na unyango unyango lweempawu. Iimpawu zibonisa kuphela isifo, sisiphumo sayo. Into ephambili ukufumana isizathu sesifo.
Kuyafana okufanayo kunyango lwenkunkuma. Into ephambili kukufumana isizathu. Ubunzima kukuba emva kokuxinezeleka, ubunwele buqala ukuphela emva kweenyanga ezimbalwa. Ngoko ke, kunzima ukubopha intlungu kwintsibano ebomini bengqondo. Nangona kunjalo, nakweyiphi na imeko, kufuneka ihlolwe ukuphelisa isizathu. Ngokomzekelo, uxinzelelo olunjalo lomzimba luya kuba yinkqubo yokonyango ngamayeza. Ukuze ukucima isizathu, kubalulekile ukudibana nodokotela malunga nokurhoxiswa kweziyobisi okanye ukufaka endaweni yazo ukuze ungene.
Kungenzeka ukuba usandul 'ukugula kakhulu, kwaye emva kwexeshana iinwele zakho zaqala ukuwa. Ngaphambi kokuba unyamekele inwele, kufuneka uvuselele umthambo okhuselekile.
Ukuba, ngokomzekelo, unesifo se-scalp, ngoko ke iimpawu ezahlukeneyo ezinokondla ukulwa neentlungu aziyi kunceda. Baza kuqhubeka behla, de kube usuphilise isifo.
Ukuba unxiba i-headwear enzima ebusika, ukusabalalisa kwe-scalp kunokuphazamiseka, kwaye ngoko ke, iinwele ziqala ukuphuma. Ukuphelisa kwesi sizathu nje - shenxisa i-headgear ngokulula okanye ubeke kwi-hood.
Ukuba isiqhelo siphelile, kufuneka uzame ukubuyisela ukukhula kweenwele. Nazi ezinye iziphakamiso ezinoncedo malunga nendlela yokwenza oku:
• Ama-masks anondayo. Ayikho imfihlo yokuba i-burdock, ioli ye-castor, inqanda ukulahlekelwa yintlungu. Kwi-scalp, gubungela ioli, gubungela iinwele ngefowuni ye-polyethylene kwisigamu seyure, uze uhlambe kakuhle iinwele. Ukufezekisa iziphumo ezilungileyo, kucetyiswa ukuba uthenge i-vitamin B kwi-capsule kwi-pharmacy.
• Ukuhlambalaza kwesikhumba. Ukuphucula ukuphucula ukujikeleza kwegazi. Igazi linika amavithamini kunye nezondlo kwi-follicle yeenwele, ngoko kubalulekile ukuba iiseli zegazi zifike ngokufanelekileyo kwiiseli ze-scalp. Ngexesha lokuhlamba, gcoba intloko yakho ngeminwe yakho.
• Imaski evela kwimveliso yobisi enotyiweyo. I-Kefir okanye nayiphi na imveliso yobisi enomuncu inotyebile kwi-vitamin B, ngoko kuyimfuneko yokukhula kweenwele, ngoko kanye kanye ngeveki unokwenza iimaski kwiimveliso zobisi ezivuthiweyo.
• I-Shampoo malunga nokulahleka kweenwele. Ukuhlamba intloko ungasebenzisa i-shampoos ekhethekileyo. Abavelisi bezonkcenkceshi zanamhlanje banikeza uluhlu oluninzi lweibhalms, i-shampoos kunye neengxaki ezizeleyo zokunyangwa kweenwele.
• Awukwazi ukudibanisa iinwele ezimanzi, zama ukunciphisa ukusetyenziswa kwemveliso yokupakisha, isomisi ezinwele, ukulungiswa kwensimbi okanye isinyithi esilungisa.
• Isondlo esifanelekileyo. Kubaluleke kakhulu ukuba ulwa neentlungu. Zama ukudla ukutya okuninzi okuqulethe iivithamini B (i-peas eluhlaza, inyama yempethu, imvana, okusanhlamvu, inyama) kunye neC (i-citrus, kiwi).
Ukuba imbangela yokulahlekelwa kweenwele i-hormonal ihlahlela emzimbeni wowesifazane (ukuyeka umyeni okanye ukubeleka), ngoko kufuneka ulinde ukuba umzimba uphinde ulandele imvelaphi ye-hormonal yemvelo. Ngoxa ulinde, kufuneka wenze le nkqubo ilapha ngentla - oku kuya kunceda ukunciphisa ilahleko.
Iimfesi ze-Shampoo, ngeentlobo ezahlukeneyo zeenwele ekhaya
Abapheki bezinwele: imfihlelo yempumelelo
Iimali zokutshisa: senza i-biovavavku ekhaya
Ukuzilolonga ukululaza umzimba
Yintoni evumelekileyo kumyeni ngokumalunga nomfazi wakhe kwi-Islam?
Ngaba kuyingozi ukusebenzisa isiseko?
Ukuba imbangela yokungathembeki yayinothando
Ukuba abantu basebenzisa ububele bakho
Ikhee le-cream cream
Iingcamango zokuphucula icebo lakho lomyezo
Ukuzalwa kwe-jaundice kumntwana omncinane
Ama-muffins e-Orange ane-cranberries
Eggplants nge nut
Isaladi yomhlophe yamhlophe